Suuta jedhani dubbii fixatani daandii tolfatani galaa jiru fakkaata warrii ABO. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSuuta jedhani dubbii fixatani daandii tolfatani galaa jiru fakkaata warrii ABO.
Suuta jedhani deemun, gamaa fi gamas ilaalaa deemun ammas barbaachisaa. Biyyattiin nagadhaan gara dimokraasitti cee’aa jirtii. Kanaaf ammaaf lolli hin jiru garuu qawwee ofirraa darbuun hin taatu. Inumaayyu sirritti hidhatu dha. WBO qophaattis ta’e akka raayyaa tokkotti mootummaa Oromiyaa jalatti jabeessun barbaachisaa dha.
ABOn tokko. ABOn lamaafi sadii hin jiru. Oromiyaatti paartilee siyaasa sadii yookan afur ta’u danda’u ammaa achitti kan siyaasa keessatti akka filannotti dhiyaatan. ABOn garuu tokko.
Paartileen kunnin imaammata diingade fi hawaasummaatin adda bahu dandau. Fakkeenyan kaasa. ABOn kaleessas hara’as borus sirna Gadaa fudhate ittin buluf immaamatatti jijjiree socha’a. ABOn dhaaba soshaalistii dha. Kana jechuun dhaabillee diinagde ciccimoo ta’an kana akka tele, humna ibsaa, daandii baaburaa, daandii qilleensaa, warshaale, bakka albudaa, bishaan ujumoo fi kkf mootummaadhaan dhunfatamu fi bulu jechu dha. Mootummaan Abiyyi Ahmad hanga tokko dhaabillee kana gara dhunfaatti akka jijjiraman barbaada. Kana ABOn mormuu qaba filannoo dhufutti. Dhaabillee kana kan feederaalaa gubbaa jiran Oromoof akka ta’an godhani tolchu, kan naannoo jiran ammoo jabeessu barbaachisa. Oromoon dhunfaadhaan kan soreessa ta’e baay’ee miti. Akka gamtaatti garuu qabeenya qaba. Qabeeenya gamtaa ammoo kan guddisu fi raabsu qabu mootummaa dha. Kuni sirritti hubatamu qaba.
Kun fakkeenya tokko qofa dha. Kan biraa baay’ee jiru. Dabalataaf gara fulduraatti kan ilaallu ta’a